Miyuu Beeralayda Qoyska Loogu Fiirin Karaa Hawlgab Nadiif ah?
Beeraleydu had iyo jeer waxay noqdeen kuwo cusub. Ka fogaanshaha dabaysha si ay u noqoto biyaha ama warshadda hadhuudhka, si aad u qorto qorraxda si ay u qalalan tahay, beeralayda waxay muddo dheer ku tiirsan yihiin kheyraadka dabiiciga ah si ay u iftiimiyaan culeyskooda shaqo.
Hadda tiknoolijiyada la kordhin karo ee ka yimaada mashiinnada dabaysha ilaa kuleyliyeyaasha qorraxda, beeralayda ku nool gobolka Minnesota waxay keenayaan tamar la cusboonaysiin karo tallaabada xigta. Iyadoo lagu rakibayo nidaamyo yar yar oo la qaybiyey, beeraley badan, ranchers iyo mulkiilayaasha miyiga waxay soo saaraan koronto ku filan koronto ku filan guryaha guryahooda, caleenta cagaaran, lo'da caanaha, iyo qaboojinta hilibka qaboojiyaha - dhammaantoodna hoos u dhigaya qiimaha tamarta noolaha ee dhulka ay haystaan.
Awoodda dib loo cusboonaysiin karo ma leedahay awooda lagu siinayo mustaqbal dheeri ah beeralayda Minnesota? Taasi waa su'aasha ah in Ururka Beeraha ee Minnesota uu hadda baaritaan ku sameeynayo ku dhowaad 14,000 oo xubnood oo ka tirsan gobolka oo dhan. Ururka horumarinta beeraha ee horumarinta beeraha ee horumarinta beeraha, oo la kaashanaya machadka McKnight Foundation, wuxuu hogaaminayaa kulamo dhageysi iyo taxane ah si uu u barto wax badan oo ku saabsan sida ay u shaqeeyaan in ka badan 70,000 oo ah hawlgallada beeraha ee isticmaalaya tamarta dib loo cusboonaysiin karo-iyo meesha laga yaabo inay u baahdaan ilo iyo siyaasad xalka.
Sida ku cad Sharciga Sharciga ee Dawlada ee Gobolka, beeralayda Minnesota waxay geyn karaan rakaabka dabaysha, saliidda qorraxda iyo nidaamyada kale ee loo qaybiyey ee hoos yimaada 40kW, kaas oo ka goosan kara awooda ku filan si loogu adeego baahida tamarta sannadlaha ah ee qoysaska Maraykanka. Beeraleydu waxay awood u yeelan karaan tamarta meesha looga baahan yahay hawlgalkooda beeraha, ama iibiya tamarta dheellitirka ah ee qiimaha tafaariiqda ah ee loo yaqaan co-ops iyo bixiyeyaasha kale ee korontada ee bulshadooda.
"Tani waxay u muuqan kartaa sida cusub ee beeraha beeraha, laakiin beeralaydu had iyo jeer waxay ahaayeen kuwo horay u adeegsan jiray tiknoolajiyad," ayuu yiri Bruce Miller, oo ah agaasimaha ururka MFU. "Waxaan ka imid waxyaabo dhaxal ah oo wax ku ool ah."
Sannadka 2020, Waaxda Tamarta ee US waxay saadaalisay in tamarta dabaysha kali ah ay ka caawin karto beeralayda iyo mulkiilayaasha miyiga inay ku darsadaan $ 1.2 bilyan oo dakhliga cusub.
Iyada oo taariikhaha taariikhiga ah ee ku soo noqda qarniga 20-aad, Ururka Beeraha Xoolaha Minnesota wuxuu sameeynayaa tamar la cusboonaysiin karo mid ka mid ah mudnaanta koowaad ee siyaasadeed. Waxaad arki kartaa caddaynta saxda ah ee saqafka Xarunta cusub ee Farmaajo Union ee St. Paul, taas oo ay ku jiraan tiro kooban oo ka mid ah saldhigyada qoraxda ee bixiya qayb ka mid ah kharashaadka tamarta ee ururka, oo u adeega sidii fasal furan oo loogu talagalay xubnayaasha xiisaha leh ku saabsan hirgelinta tamarta la cusboonaysiin karo ee hantidooda. Qeybo ka mid ah waddanka, kireysiga dhulka loo keeno alaab-bixiyayaasha tamarta qoraxda ayaa qiimeeya saddex goor dhalidda dalagyada caadiga ah. Sannadka 2020, Waaxda Tamarta ee US waxay saadaalisay in tamarta dabaysha kali ah ay ka caawin karto beeralayda iyo mulkiilayaasha miyiga inay ku darsadaan $ 1.2 bilyan oo dakhliga cusub.
"Caanaha oo qiimahoodu hooseeyo taariikh ahaan, beeralayda caanuhu waxay raadinayaan siyaabo cusub oo loo badbaadiyo lacag iyo kor u qaadista kharashka tamarta ee sii kordhaya saqafka barniga, sidaas darteed kordhinta tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee beeraha waxay gacan ka geysan kartaa dhimista kharashkan, iyo beerahooda qoyska, "ayuu yidhi Miller. "Goynta dabaysha ama tamarta qorraxda waxay noqon kartaa dalag kale oo lacag soo-galin ah oo ka dhigi kara isbeddel wayn oo ka dhex dhaca bulshooyinka baadiyaha ah."